Aung.Info | မြန်မာလူငယ် တစ်ယောက်နှင့် ထိုင်းကချေသည် ဇာတ်လမ်း
မြန်မာလူငယ် တစ်ယောက်နှင့် ထိုင်း ကချေသည် ဝထ္ထု ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ကို အခန်းဆက် ရေးသား တင်ဆက်သွားပါမည်။
ထို ဝထ္ထုသည် တဏှာမှ – အချစ် – ထို့နောက် သံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားစရာ အခြေအနေဖြင့် ကြုံတွေ့ရသည့် ဖြစ်ရပ်မှန် အဖြစ်အပျက် အပေါ်တွင် အခြေခံ ရေးထားသည့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုဇာတ်လမ်းမှာ ထိုင်းတို့၏ အခြေခံ အသွင်အပြင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကျော်ကြားသည့် ည ပျော်တော်ဆက်များ၏ အကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထင်ထင်ရှားရှား ဖော်ပြမည် ဖြစ်ရာ အချို့သော အခန်းများမှာ ညစ်ညမ်းသည့် အရေးအသားများ ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်ပါလိမ့်မည်။
သို့ဖြစ်ရာ ထိုဝထ္ထုမှာ အချို့စာဖတ်သူများ အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ဖတ်ရှုရန် မသင့်သော ဝထ္ထု ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည့် အကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။
(ထိုင်းကချေသည် – အပိုင်း ၁ သို့)
Kaung Ma Lay facebook user says:
29/Sep/2016 at 8:13 pm
Mee Lay facebook user says:
29/Sep/2016 at 12:33 pm
29/Sep/2016 at 11:44 am
အလုံးဖတ်ပြီးသွားပါပြီ ၊ အရမ်းကောင်းလို့ နောက်ဆက်တွဲ မျှော်နေပါတယ်နော် ၊ ကျေးဇူးပါ
ကိုစစ် ငြိမ်း facebook user says:
28/Sep/2016 at 5:48 pm
16က မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ် အလင်းပြပါအူး
28/Sep/2016 at 5:56 pm
ဖတ်လို့ မရတာလား? ဘာဖြစ်လို့လဲ? စာမျက်နှာက အွန်လိုင်းမှာ ပေါ်နေပါတယ် – http://aung.info/blog/?p=170
Tun Tun facebook user says:
28/Sep/2016 at 3:27 pm
Saing Thuya facebook user says:
28/Sep/2016 at 12:41 pm
Rock Queen facebook user says:
28/Sep/2016 at 3:55 am
Airmon Taryar facebook user says:
27/Sep/2016 at 2:53 pm
Kaung Kaung facebook user says:
27/Sep/2016 at 2:29 pm
Link တင်ထားတဲ့ အခန်းတွေက ဖတ်ရတာအဆင်မပြေဘူး font အခက်အခဲရှိလို့
ဖြစ်နိုင်ရင် linkမတင်ပဲ ဘလော့ဂ်မှာပဲ တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ
27/Sep/2016 at 3:36 pm
ဖေ့စ်ဘွတ်က အခန်းတစ်ခန်း ကို စာများတဲ့ အခါ တင်လို့ မရတော့ ခွဲတင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့ အခန်းတွေက ဇာတ်ကောင် တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်ကို ရေးတော့ စာရှည်သွားခဲ့ရင် ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ရတာ အခက်အခဲ ရှိသွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ရေးတင်ရတာပါ၊ စာလုံးအခက်အခဲက -ဖတ်တဲ့ browser ပေါ်မှာ မူတည်မယ် ထင်ပါတယ်၊ ကျနော်လဲ browser အားလုံးနဲ့ဖတ်ရတာ အစဉ်ပြေအောင် ကြိုးစားကြည့်ပါအုံးမယ်။ – ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
28/Sep/2016 at 4:47 am
Kyaw Htun Oo ဘယ်ပေါ်မှာ ဖတ်လဲ? ဘယ် browser နဲ့ ဖတ်လဲ? တချက်ပြော ပြနိုင်မလား-
28/Sep/2016 at 5:54 am
Kyaw Htun Oo အခုဆို ကြည့်ရပြီ ထင်ပါတယ် – ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါ
Nyi Tun facebook user says:
29/Sep/2016 at 8:22 am
ဖတ်လို့ မရတာက ဆိုးတယ်
29/Sep/2016 at 9:09 am
Nyi Tun ဘာ Browser နဲ့ ဖတ်တယ်- ဘာပေါ်မှာ ဖတ်တယ် ဥပမာ – windows, android, ios စသည်ဖြင့် ပြောနိုင်ရင် ဖတ်လို့ အစဉ်ပြေအောင် စီစဉ် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
29/Sep/2016 at 10:44 am
android ပါ အပိုင်း ၁၁ ကစပြီး ဖတ်လို့မရတော့တာပါ
29/Sep/2016 at 11:46 am
ဒီ လင့် ကနေ စပြီး နောက် အပိုင်း တွေကို အဲ ဒီပေါ်မှာ ဆက် ဖတ်နိုင်ပါတယ် – http://aung.info/blog/?p=82
29/Sep/2016 at 12:36 pm
29/Sep/2016 at 1:35 pm
ကျေးဇူးပါ ၁၈ တင်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ရင် link တင်မယ့် အစား fb ပေါ်ဒါရိုက် တင်ပါလား အကြံပေးတာပါ
Maung Ko Lwin Oo facebook user says:
27/Sep/2016 at 2:21 pm
Doe Doe facebook user says:
27/Sep/2016 at 10:42 am
Khinmg Thein facebook user says:
27/Sep/2016 at 8:23 am
၁ကနေ ၁၄ထိ တစ်ဘရိတ်ထဲ အားပေးလိုက်ပါတယ်
27/Sep/2016 at 8:12 am
မနောဖြူ မနော facebook user says:
27/Sep/2016 at 6:00 am
Lovesick Kaung Lay facebook user says:
27/Sep/2016 at 1:48 am
Daw Khin Hnin Wai facebook user says:
26/Sep/2016 at 4:59 pm
Nyo Tun Lu facebook user says:
26/Sep/2016 at 2:15 pm